Indlu engasemva /imizuzu eyi-25 ukuya embindini weAmsterdam/iibhayisekile zasimahla - I-Airbnb
Indlu engasemva /imizuzu eyi-25 ukuya embindini weAmsterdam/iibhayisekile zasimahla
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguHugo & Marianne
UHugo & Marianne yi-Superhost
Indlu yethu engasemva ikwisitrato esikufuphi kumgama wemizuzu eyi-10 ukusuka embindini weZaandam (kunye neevenkile zokutyela, iibhari kunye neevenkile). Indawo yokupaka simahla. Indlu engasemva kwendlu yethu, ngoko ucinga ukuba usemaphandleni endaweni yemizuzu eyi-30 ukusuka kwidolophu yaseAmsterdam ekulula ukuyifikelela. Indawo oza kuhlala kuyo iquka iibhayisekile eziyi-2 zasimahla! Le ndlu yeyabucala kwaye itofotofo. Amaxabiso ethu aquka iEuro 5 irhafu yabakhenkethi yomntu ngamnye ngosuku. Ngoko akukho mali yongezelelweyo!
Indlu yakho engasemva ipholile kwaye itofotofo. Igumbi linebhedi enkulu, igumbi lokuhlambela, indawo yokugcina ukutya enefriji, i-microwave combi ioveni, ipleyiti yokupheka yombane, umatshini wokwenza ikofu, ibhedi eyisofa (1.40 x 2.00 m) enokutshintshwa ibe yibhedi (encinci) enabantu ababini. Iibhayisikile ezimbini mahala ukuzisebenzisa! Iitawuli ziqukiwe. Qaphela ukuba igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala aliwona amagumbi ohlukeneyo.
Ikwindawo ethe cwaka kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya embindini wedolophu nakwisikhululo setreyini/sebhasi. Nangona le ndlu isembindini, igadi kunye nendawo ekuyo iza kukunika imvakalelo yokuba semaphandleni phakathi kwendalo. Iibhari kunye neevenkile zokutyela zikumgama nje wemizuzu eyi-5 ngebhayisekile okanye imizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo! Emazantsi edolophu yaseAmsterdam unokufikelela kwisiqingatha seyure ngebhasi okanye ngetreyini okanye ngemizuzu eyi-30 ngebhayisekile.
Umbuki zindwendwe ngu- Hugo & Marianne
Indlu engasemva ingasemva kwendlu yethu. Siyayixabisa into yokuba wedwa kodwa xa kukho isidingo sikhona.
Inombolo yomthetho: 0479 D3AE 6CBF 7398 5989